13 Ibhokisi Lokufanisa Yezandla | Imisebenzi yezandla ivuliwe
13 Imisebenzi yezandla enamabhokisi omentshisi asekuqaleni
Elizabeth Catalan | 17/04/2022 18:40 | Kubuyekezwe ku- 18/04/2022 18:10 | Imisebenzi yezandla zekhadibhodi, Ubuciko nezinto zokwakha
Ubani obengacabanga ukuthi ibhokisi likamentshisi elilula linganikeza umdlalo ongaka uma kuziwa ekudwebeni? Ngakho yilokho! Kunemisebenzi yezandla eminingi enamabhokisi kamentshisi ongathuthukisa ngawo wonke ubuhlakani bakho futhi ube nesikhathi esijabulisa kakhulu.
Kusukela ezingelosini ezincane ukuhlobisa isihlahla sikaKhisimusi, amabhokisi obucwebe agaywe kabusha oSuku Lomama, imininingwane yothando yoSuku Lwezithandani noma izinto zokuhlobisa ideski noma ishalofu esinalo ekhaya futhi ngaleyo ndlela silinike ukuthinta kwasekuqaleni.
Uma ufuna ukuzama ukwenza imisebenzi yezandla ngamabhokisi kamentshisiUngaphuthelwa yilolu hlu lwemisebenzi yezandla engu-13 enamabhokisi omentshisi ajabulisayo nawoqobo. Uzoba nesikhathi esihle sokuzihlobisa!
1 Ingelosi encane kaKhisimusi enebhokisi lemeshi
2 Ibhokisi likamentshisi elincane isifuba samadrowa
3 Izipho Zebhokisi Lokufanisa
4 Ibhokisi lokufanisa elinezinhliziyo
5 Izincwadi ezincane ezinamabhokisi omentshisi
6 Amabhokisi omentshisi anemiklamo yokuhlobisa
7 Amabhokisi okufanisa ozonikezwa ngawo
8 I-Matchbox Suitcases
9 diy express ebhokisini likamentshisi
10 I-DIY: Ngamabhokisi kamentshisi
11 Ibhokisi lobucwebe bebhokisi likamentshisi eligaywe kabusha
12 Ikhamera yesithombe enamabhokisi omentshisi
13 ibhokisi likamentshisi lothando
Ingelosi encane kaKhisimusi enebhokisi lemeshi
Njengempahla yezandla, amabhokisi omentshisi anikeza umphumela omuhle kakhulu futhi ungenza izinto ezipholile ezinjengalezi ingelosi encane kakhisimusi. Izinto ozozidinga ukuze wenze lo mhlobiso omuhle wesihlahla sikaKhisimusi yibhokisi likamentshisi elingenalutho, ucezu loboya, upende omnyama nomhlophe, ibhulashi, isikelo, iglu, ipensela nocezu lwekhadibhodi.
Ungabona ukuthi kwenzeka kanjani kokuthunyelwe Ingelosi encane kaKhisimusi enebhokisi lemeshi. Impela le ngelosi encane izokhipha wonke umoya wakho kaKhisimusi futhi ingenye yezandla zebhokisi likamentshisi ezilula ukuzenza nezingane.
Ibhokisi likamentshisi elincane isifuba samadrowa
Isithombe | umacrafts
Amabhokisi okufanisa ayinto enhle yokwenza isifuba esincane samadrowa okwetafula lokugqoka ukuze amacici, namasongo nezinye izingcezu zobucwebe zingagcinwa ngaphakathi esikhundleni sokuba nazo zixubene.
Lapho uhlobisa amashalofu azokwakha lesi sifuba samadrowa, ungenza ibhokisi likamentshisi libe ngelakho futhi ulihlobise ngezithombe ezihlukile ezikhomba okungaphakathi.
Njengezinto zokwakha uzodinga amabhokisi kamentshisi ukuze uwasebenzise ngethoni yemvelo noma ukumboza ngekhadibhodi nephepha elinemibala. Umphumela muhle futhi uzodinga kuphela ukuzivumelanisa nomklamo onawo engqondweni. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani kuwebhusayithi kaMamanualidades.
Izipho Zebhokisi Lokufanisa
Kodwa isifuba esincane samadrowa akuwona wodwa ubuciko obungenziwa ngamabhokisi kamentshisi. Kukhona nezinye ubuciko bokuqala bebhokisi likamentshisi lokho kuyamangalisa futhi unganikeza ngisho nomuntu okhethekile.
Lokhu kuyindaba yale misebenzi emincane yobuciko ozodinga ukuthi uthole amaphepha anombala, isikele, omaka, iglu kanye nezimpawu. Ngekhono elincane kanye nomklamo okhuthazayo, uzoba nemisebenzi yezandla emikhulu njengaleyo ozoyithola kuwebhusayithi yeJungle Paper. Ngakho-ke ungabe usacabanga ngakho futhi ngokushesha nje lapho usunesikhathi samahhala, qala ukwenza eminye yale misebenzi yezandla emangalisayo. Uzoyithanda!
Ibhokisi lokufanisa elinezinhliziyo
Nakuba kungase kungabonakali sengathi ekuqaleni, amabhokisi kamentshisi ayimpahla ekahle yokuletha umlayezo omuhle kothile okhethekile. Zingenziwa zibe ngezomuntu siqu ngokubingelela. Ngaphezu kwalokho, kuwumqondo osebenzayo kakhulu ukugcina into ekhethekile ngaphakathi kwayo.
Isibonelo, uma ungenaso isikhathi esiningi kodwa ungafuni ukuphuthelwa ukwenza ubuciko bebhokisi likamentshisi, ngincoma ukuthi ukubheke lokhu. ibhokisi likamentshisi elinezinhliziyo. Yiziphi izinto ozozidinga? Yiqiniso, ibhokisi likamentshisi, amakhadibhodi anemibala, isikelo, iglue, izimpawu kanye nentambo. Ungabona umsebenzi wezandla kuwebhusayithi yePapelisimo. Ingenye yezandla ezinhle kakhulu zebhokisi likamentshisi ongazinika amaholide afana noSuku Lwezithandani, Usuku Lomama noma Usuku Logogo Nomkhulu.
Izincwadi ezincane ezinamabhokisi omentshisi
Okunye okusetshenziselwa ukunikeza amabhokisi kamentshisi ukwenza lawa abe mahle izincwadi ezincane ongahlobisa ngawo amashalofu endlu yakho. Futhi kuyindlela yasekuqaleni yokuphinda usebenzise amabhokisi kamentshisi uma esephelile.
Ungakhetha iphepha lokugoqa olithanda kakhulu ukumboza "izembozo" zencwadi futhi ulihlanganise nomgogodla. Izinto ozozidinga amabhokisi kamentshisi ambalwa, isibhamu seglue, amapensela, amabhulashi, iglue emhlophe nephepha lokugoqa. Ungabona ukuthi kwenziwa kanjani kuwebhusayithi artesinfantiles.org
Amabhokisi omentshisi anemiklamo yokuhlobisa
Amabhokisi omdlalo anikeza ukudlala okuningi. Ngomcabango omncane kanye nezinto zansuku zonke ungakha ezincane imisebenzi yobuciko ukufaka ukuhalalisela kwasekuqaleni, ukuzinikela, izimemo noma amabhonasi asebenzisekayo. Kuwebhusayithi ye-Edding.com ungabona izibonelo ezithile.
Uzodinga amabhokisi kamentshisi amaningana, izimpawu ezinemibala namakhadibhodi, omaka, isikelo neglu. Njengoba ubona, ziyizinto ezilula kakhulu okungenzeka ukuthi usunazo kakade ekhaya kusuka kwezinye izinto zezandla.
Amabhokisi okufanisa ozonikezwa ngawo
Isithombe| Phila Hleka Rowe
Uma umenywe ngosuku lokuzalwa futhi uzonikeza ucezu lobucwebe njengesipho (njengendandatho noma amacici), indlela enhle neyokuqala yokunikeza isipho ukudala ibhokisi likamentshisi elizonikezwa ngezinto ezigaywe kabusha. Ungakwazi ngisho ukuwugcwalisa ngoshokoledi.
Njengakweminye imisebenzi yezandla enamabhokisi kamentshisi kulolu hlu, izinto ozozidinga aziyinkimbinkimbi nhlobo: amabhokisi kamentshisi, iphepha lokugoqa, iribhoni, i-awl, isikelo neglu. Kuwebhusayithi ye-Live Laugh Rowe ungabona le DIY nokuthi ungayenza kanjani.
Okulandelayo ngomunye wemisebenzi yezandla yebhokisi likamentshisi edinga isineke nekhono. Imayelana nabanye amapotimende amahle okuhlobisa ideski noma amanye amashalofu.
Njengezinto zokwakha kuzodingeka uqoqe izinto ezimbalwa. Phakathi kwawo amabhokisi kamentshisi, iphepha elinsundu lokuwagoqa, iglu, isikelo, izitika zokuhlobisa kanye nephepha elikhudlwana nelimnyama. Kuwebhu Umama wami unebhulogi ungabona ukuthi kwenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo.
diy express ebhokisini likamentshisi
Njengowangaphambili, emsebenzini wezandla olandelayo uzodinga ikhono elincane nesineke njengoba kudingeka izinyathelo ezimbalwa ukuze uqedele yonke imihlobiso kulobu buciko bebhokisi likamentshisi elidala kabusha isiteji esincane lapho kuxoxwa khona indaba
Izinto ezibalulekile ozozidinga ukuze wenze lobu buciko bebhokisi likamentshisi ibhokisi likamentshisi ngokwalo kanye nesivalo sikakhokho okuzoba umlingiswa ozohumusha indaba esiyidalayo. Ezinye izinto ozozidinga upende we-acrylic, amabhulashi, amanabukeni ahlotshisiwe, uvolo nezinye izinto ongazibona kuwebhusayithi ye-Handbox kanye nenqubo yokwenza le Diy ecacile ebhokisini likamentshisi.
I-DIY: Ngamabhokisi kamentshisi
Enye ye imisebenzi yezandla ngamabhokisi kamentshisi ongazilungiselela yile DIY. Ngokungafani namanye amamodeli, lo msebenzi wezandla awunzima kangako, ulungele ukulungiselela nezingane ezincane futhi uchithe umdwebo wantambama ojabulisayo nokudlala.
Imodeli esesithombeni iyindalo yomdwebi wezithombe uJenny Melihove. Kuwebhusayithi yakhe ungabona imisebenzi yezandla epholile ayenzayo. Ukwenza le DIY uzodinga amabhokisi kamentshisi, iphepha lokugoqa, amakhadibhodi, omaka abanemibala, iglu, isikelo nezinye izinto.
Ibhokisi lobucwebe bebhokisi likamentshisi eligaywe kabusha
Izingane ziyakuthanda ukwenza imisebenzi yomndeni futhi isipho esihle ezingasinikeza omama bazo yilesi ibhokisi lobucwebe likamentshisi eligaywe kabusha. Ngaphezu kokuba nesikhathi sokuzijabulisa, kuzosiza abancane ukuba bathole amakhono namakhono emoto kanye nenani lokugaywa kabusha.
Bhala phansi izinto ozozidinga: amabhokisi kamentshisi amakhulu, iglu, sikelo, amabhulashi, iglu, ipensela, amakhadibhodi anemibala, izitikha zokuhlobisa kanye nobuhlalu obukhulu.
Ukuze ubone ukuthi lenziwa kanjani leli bhokisi lobucwebe bebhokisi likamentshisi eligaywe kabusha, ungathola imiyalo kuwebhusayithi Yomhlahlandlela Wezingane.
Ikhamera yesithombe enamabhokisi omentshisi
Obunye ubuciko obunamabhokisi kamentshisi ongawulungisa yilolu luhle ikhamera yesithombe esincane ngebhokisi likamentshisi. Ngaphakathi kuyo ungafaka izithombe ezincane noma umyalezo omuhle womuntu ofuna ukumnika le khamera.
Njengezinto zokwakha uzodinga ibhokisi likamentshisi, amakhadibhodi anemibala, omaka, isikelo, iglu nezinye izinto kuye ngesakhiwo ofuna ukusinikeza. Kuwebhusayithi ye-Woman of 10 ungabona ukuthi kwenziwa kanjani.
ibhokisi likamentshisi lothando
Uma uthanda ubuciko obunamabhokisi kamentshisi, iwebhusayithi ethi Woman of 10 ibonisa eyodwa ongayilungiselela uSuku Lwezithandani. Kuyimininingwane encane yothando ingxenye yakho engcono ngokuqinisekile ezoyithanda: a ibhokisi elincane ongagcina kulo ukhiye wenhliziyo yakho.
Njengoba ubona, kuwumsebenzi wezandla olula kakhulu ukuwenza futhi unencazelo enhle. Uzodinga kuphela ukuthi uthole ibhokisi likamentshisi, amakhadibhodi kanye nephepha elimhlophe lokulimboza, amakhadibhodi abomvu okudweba inhliziyo, iglue, isikelo kanye nokhiye omuhle ozowugcina ngaphakathi. Uzoshiya i-crush yakho ingakhulumi!
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Ubuciko nezinto zokwakha » Imisebenzi yezandla zekhadibhodi » 13 Imisebenzi yezandla enamabhokisi omentshisi asekuqaleni
Ikati eliwolintshi elenziwe ngekhadibhodi
Ikhandlela lokuhlobisa lePhasika